Sida loo daro loona sameeyo ebook kasta oo la jaan qaada Kindle-kaaga adoo adeegsanaya Telegram | War gadget
Ruben gallardo | | Akhristayaasha, Tababarada
In kasta oo Apple iyo shirkadaha kaleba ay waligoodba doonayeen inay qaybtooda keega ka helaan warshadaha elektaroonigga ah, haddana sidoo kale waa run in weligiis boqor ka jiray suuqan: Amazon iyo barnaamijkeeda Kindle. Rugta ganacsiga elektaroonigga ah waxay had iyo jeer ogtahay sida loo helo buug-yare ballaaran oo cinwaannada digitized iyo sidoo kale - iyo uguyaraan - macaamiishooda la siiyo aalado si ay ugu raaxaystaan ​​buugaagta si fudud.
Dhab ahaan, waxaan ula jeednaa Kindle iyo noocyadiisa kala duwan. Waa kooxo in bixi khibrad adeegsi oo wanaagsan hana ka daalin indhahaaga haddii aad ka mid tahay kuwa saacadaha wax akhriyaya: Waxay adeegsadaan farsamada khad elektarooniga ah. Hadda, sida had iyo jeer, waxaa jira "laakiin" isticmaalkeeda. Adigana waa lagugu xukumay inaad had iyo jeer u isticmaasho ebook-ka qaabkooda.
Sida dhowr jeer looga faallooday, iyo sida Amazon ay marar badan u sheegtay, shirkaddu waxay ka faa'iideysataa adeegyadeeda ee kama faa'iideysato qalabka ay iibiso. Waxayna u muuqataa in arrimuhu aysan si xun u shaqeyneynin. Si kastaba ha noqotee, Mid ka mid ah "dhibaatooyinka" ugu weyn ee Kindle waa qaabka ay taageerayaan inuu yahay .MOBI. Hadana haddii aad si joogto ah uga mid tahay buugaagta elektarooniga ah noocan ah, waxaad ogaan doontaa inay jiraan qaabab kala duwan oo suuqa yaalla iyo in goobaha kale ee iibku ka muuqdo. Waxaan ula jeednaa .EPUB. Maxaa dhacaya haddii aad iibsato buug elektaroonig ah - ebook - oo ka baxsan Amazon oo aad leedahay Kindle? Jawaabtu rajo badan ma leh: ama adigu kuma raaxeysatid cinwaanka la soo dejiyey; mise waxaad raadineysaa aqriste beddel ah; ama u beddelo qaabkaas mid ku habboon Kindle. Tanina waa mid aad u fudud haddii aan isticmaalno bot ka soo baxa adeegga farriinta deg dega ah ee caanka ah ee Telegram.
1 Si aad u shiddo Bot: waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo isticmaalkeeda
2 Ku samee Kindle To Bot akoonkaaga Telegram
3 Laga bilaabo adeegsiga "Si aad u shiddo Dhalada" Telegram
Si aad u shiddo Bot: waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo isticmaalkeeda
Haddii aad weli u maleyneyso in Telegram uu yahay adeeg fariin deg deg ah oo fudud, aad baad u qaldan tahay. Hagaag haa, sidoo kale waa Laakiin adeegani wuxuu leeyahay fursado badan oo ka badan intaad moodeysid. Marka lagu daro lahaanshaha marinnada mowduuc kasta oo aad xiiseyneyso - haa, Waxay sidoo kale u nugul tahay shixnadaha alaabada xuquuqdeeda leh-, sidoo kale waxay leedahay qalab u xiiso badan sida kan aan maanta idiin soo bandhigno: Inaad Shiddo Dhalo.
Bootooyinkaani waa codsiyada-saddexaad ee ka shaqeeya gudaha nidaamka deegaanka ee Telegram. Xaaladdan gaarka ah waxay la shaqeysaa koontadaada Kindle, kan aad furayso markii ugu horreysay markii aad bilowdo adeegsiga barta akhriska dhijitaalka ah ee Amazon. Hagaag, ku soo deji Telegram mashiinka aad dooratay. Xusuusnow inaad sidoo kale u adeegsan karto adoo adeegsanaya biraawsarkaaga ama aad kala soo bixi karto barnaamijka desktop-ka oo aad ku isticmaali karto kombiyuutarkaaga. Taasi waxay tiri, waad sameyn doontaa ku dar ah Si aad u shiddo dhalada koontadaada oo aad bilowdo isticmaalkeeda. Laakiin maxaad u baahan tahay si aad u qaabeyso?
Ku samee Kindle To Bot akoonkaaga Telegram
Waxaa jiri doona laba shay oo asalkan asalka ah ee Telegram bot kaa codsan doono inaad bilowdo isticmaalkiisa. Waxaa intaa dheer, markii aad ku darto koontadaada, waxaad arki doontaa in tilmaamaha ay ku soo baxayaan Ingiriisi. Maxay kaa weydiinaysaa? Hagaag, waxa ugu horeeya waa inaad ka jawaabtaa gudbinta koontadaada shidan ee shaqsiga ah. Taasi waa, midka leh qaab dhismeedka soo socda: username@kindle.com. Si aad u hesho waxa saxda ah cinwaanka emaylkaaga shakhsi ahaaneed, gal koontadaada Amazon oo aad tag qaybta qaybta hoos u dhacda Maamul waxyaabaha iyo aaladaha ".
Tabs kala duwan ayaa soo muuqan doona, kii ugu dambeeyay ee tilmaamaya "Dejinta". Guji iyada iyo qaybta «Dejinta dukumiintiyada shaqsiga ah» waxaad arki doontaa macluumaadka ku saabsan koontadaada @ kindle.com. Mar alla markii aad xisaabtan u dirto Bot (Si aad u shido Khariidadda), waxay noqon doontaa wakhti aad ku darto xisaab emayl ah oo adeegani ku siinayo.
Akoonkan waa in lagu daraa qaybta «Liiska cinwaanada emaylka ee idman ee diritaanka dukumiintiyada shaqsiga ah». Doorashadan ayaa waxyar ka yar talaabadii hore. Waxaad hubin doontaa in cinwaanka emaylkaaga shakhsi ahaaneed sidoo kale la helo. Gali koontada emaylka ee kuu sheegaysa Inaad Shiddo Dhalo waana intaas.
Laga bilaabo adeegsiga "Si aad u shiddo Dhalada" Telegram
Waxay noqon doontaa waqtigii la bilaabi lahaa isticmaalkiisa. Ku soo aruuri buugaagta .EPUB, tusaale ahaan, oo aad rabto inaad u beddesho si aad uga akhrisan karto akhristahaaga Kindle. U dir feylka [faylasha] Bot isla markaana beddelaaddu ma qaadanayso wax ka badan laba daqiiqo oo saacad ah. Maxaa dhacaya markaa? Dhamaan talaabooyinkii hore ee aan sameynay si aan uqeybino Bot-kan waxay ahaayeen in la hubiyo in marka u badalashada qaabka .MOBI la dhameeyo, buuga si otomaatig ah loogu soo shubo koontadaada Kindle.
Waa inaad sugto dhowr daqiiqo inta buuggu soo muuqanayo. Waxayna ku samayn doontaa qaybta dukumiintiyada Kindle; taasi waa in la yiraahdo, isla meesha laga soo diro dhammaan noocyada feylasha - badanaa qaab PDF ah - si dib loogu eego akhristaha buuga caanka ah. Ugu dambeyntiina, xusuusnow Kindle-kaas Waa la isticmaali karaa labadaba akhristaha buugga, a kiniin iyada oo loo marayo barnaamijyada rasmiga ah, ee a smartphone ama kombiyuutarka.
* Xusuusin: ka Actualidad Gadget mas'uul kama nihin adeegsiga la siiyay Botkaan. Waxaan fahansanahay in dhamaan waxyaabaha loo badalayo si sharci ah lagu helay
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo daro loona sameeyo ebook kasta oo la jaan qaada Kindle-kaaga adoo isticmaalaya Telegram
Dhibcaha ayaa ii sheegaya inaan kaliya sameyn karo 5 beddelaad bishiiba ...
Jawaab Javier Mercadé